Cayaartoy loo ganaaxay inuu afuray - BBC Somali
Cayaartoy loo ganaaxay inuu afuray
Image caption Cali Kariimi waxaa lagu ganaaxay 40 kun oo dollar kadib markii uu jabiyay soonka
Mid ka mid ah ciyaartoyda kubbadda cagta ee ugu caansan dalka Iran, oo kooxda laga eryey kaddib markii uu soonka iska furay, ayaa naadigiisu dib u soo celiyay.
Cali Kariimi waxaa loo sheegay inuu mar kale naadiga u ciyaari karo haddii uu bixiyo ganaax dhan 40 kun oo dollar.
Cali Kariimi waxaa loogu yeeraa Maradona -ha Asia. Waxaa uu ka mid yahay ciyaartoyda loogu jecel yahay dalka Iran, waa laacibkii 2aad ee muddada ugu dheer u saftay Iran, laakiin waxaa kaloo uu yahay shakhsi muran dhaliya.
Waxaa eryay naadigiisa oo la yiraa Steel Azin horraantii bishan inuu jebiyay soonka bisha ramadaan markii la arkay isagoo biyo cabbaya mar tababar la sameynayay.
Jawaabta ka timid taageerayaasha naadiga waxay ahayd ashtako iyo taageero buuxda oo laacibka xiddigga ah ay siiyeen.
Waxaa kaloo taageeray ciyaartoy hore ee dalka Iran oo iyaga qudhoodu soo maray inay ku soomaan iyagoo tababar ku sameynaya cimilada kulaylka badan ee dalka Iran.
Haatan naadigu way soo celiyeen Kariimi kaddib markii ay ku ganaaxeen inuu bixiyo 40,000 dollar. Waxaa uu sheegay inuu bixinayo lacagtaas hase ahaatee waxaa uu si ku celcelis ah u beeniyay inuu Islaamka u gefay.
Dadka arrimahan ka faallooda dalka Iran waxay sheegayaan in eryiddiisu ay siyaasad la xiriirto ee aysan diin salka ku hayn. Waxaa uu si cad wax uga sheegayaa xiriirka kubbadda cagta ee dalka Iran iyo maamulka naadiga Steel Azin.
Waxaana uu gacanta ku xirtay calaamad cagaar ah oo uu ku taageerayay dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee dalka Iran ciyaar loogu soo baxayay koobkii adduunka oo ka dhacday magaalada Seol sanadkii hore.